kunming.cn - စီစီတီဗွီ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် “တရုတ်၌ ပန်းပွင့်ဖူးခြင်း”သည် ယူနန့် Rhododendron protistum var. giganteum ကို အလင်းဆုံပေးခဲ့
စီစီတီဗွီ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် “တရုတ်၌ ပန်းပွင့်ဖူးခြင်း”သည် ယူနန့် Rhododendron protistum var. giganteum ကို အလင်းဆုံပေးခဲ့
2020-05-06 15:38 ရောင်စုံတိမ်တံတား
ယူနန်သည် “ရုက္ခဘုရင့်နိုင်ငံ” နာမည်ကောင်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ချီးကျူးခံ လျက်ရှိသည်၊ ဤနေရာတွင် တစ်နှစ်တွင် မကြည့်နိုင်သလောက်သည့် သာယာလှပသော ရှုခင်း၊ ရာသီလေးပါးတွင် ပွင့်ဖူးနိုင်သည့် ပန်းများ ရှိပါသည်။ မေလ ၃ ရက်နေ့ညတွင် စီစီတီဗွီသည် ပြည်တွင်း သဘာဝ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးပြုစုရေး မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် “တရုတ်၌ ပန်းပွင့်ဖူးခြင်း” ပထမတစ်ခု ထူးခြားအားဖြင့် ထုတ်လွှင့်၍ အစီအစဉ်၏ ဒုတိယပိုင်း “ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင် ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးသည့် ဇလပ်နီပန်းရှုခင်း” သည် ယူနန် ကောင်းလီကုန့်တောင်မှ Rhododendron protistum var. giganteum ကို အလင်းဆုံပေး ခဲ့ပါသည်။
Rhododendron protistum var. giganteum သည် ယူနန်ပြည်နယ်၌ ဇလပ်နီပန်းမျိုး တစ်မျိုးတည်း ရှိ၍ တောနက်တောင်နက်ကြီး ထဲတွင် ပုန်းအောင်းထား သောကြောင့် ခေတ်နီးပိုင်းထက်တိုင် ဇီဝပညာရှင်သည် တွေ့ရှိခံ ခဲ့ပါသည်၊ Rhododendron protistum var. giganteum သည် ပင်ပေါက်မှ ပန်းပွင့်ဖူးနိုင်ခြင်းသို့ ကြီးပင်းလာလျှင် အချိန် အနှစ် ၅၀ ကြာ လို၍ အပင်စလုံးသည် အဖိုးတန်လှပြီး ရှားပါး လှပါသည်။
Rhododendron protistum var. giganteum ၏ အရေအတွက်သည် အခုအထိ အပင် ၃၀၀၀ မကျော်၍ နိုင်ငံတော် ပထမအဆင့် စောင့်ရှောက်ခံ ဘေးအန္တရာယ်ကြုံခါနီး ရုက္ခပင်များ စာရင်းထဲသို့ ထည့်သွင်း၍ သစ်ပင်တစ်ပင်သည် မိမိ၏ နံပါတ် ရှိပြီး ၁ မှ ၃၀၀၀ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
အခု တွေ့ရှိသည့် အကြီးဆုံး Rhododendron protistum var. giganteum တစ်ပင်သည် ၂၈ မီတာ မြင့်ပြီး အခြေခံအချင်း ၃ မီတာကျော်၊ အခြေခံ ပတ်လည်အရှည် ၁၀ မီတာ နီးပါး ရှိပြီး လူ ငါးခြောက်ယောက်တွေ ဝိုင်းပိတ်လိုက် နိုင်ပါသည်။ ပါရဂူ၏ ခန့်မှန်းချက် အရ ၎င်း၏ အသက် အနှစ် ၅၀၀ကျော် ရှိပါပြီ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးပေါ်တွင် အရေးကြီးသော ရှုစားသည့် တန်ဖိုးရှိသည့် ဇလပ်နီပန်း အမျိုး ၈၅၀ ကျော် ရှိ၍ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၌ အမျိုး ၂၇၀ ကျော် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ဇလပ်နီးများ၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယူနန်ကို လူတွေသည် “ဇလပ်နီပန်း၏ ဇာတိ” အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်လျက်ရှိသည်။ ပေါင်စန်း ကောင်းလီကုန့်တောင်မှ Rhododendron protistum var. giganteum သည် ဇလပ်နီပန်းထဲတွင် အမြင့်ဆုံး၊ အကြီးဆုံးသော အမြဲစိမ်းလန်းစိုပြည်သော ပင်စောက်ဖြစ်ပြီး အခုအထိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသာရှိသည့် ဇလပ်နီပန်းမျိုးသစ် ဖြစ်၍ လူတွေသည် “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဇလပ်နီပန်း၏ ဘုရင်”အဖြစ် ချီးကျူးခံပါသည်။
ပန်းရှုစားရန် အကောင်းဆုံးသော အချိန်ကာလ။။ မတ်လမှ မေလ
နေရာ။။ ထိန်ချုံးခရိုင်မြို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၇၀ ကွာဝေးသည့် ကျက်ထုတ်မြို့နယ် တထန်ကျေးရွာ ကောင်းလီကုန့်တောင် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးဇုန်
2020年05月06日 15:38 昆明信息港-彩云桥